मीनबहादुरको आत्मकथाः कृतघ्नता, आडम्बर र झूटको पुलिन्दा - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ कार्तिक १०, सोमबार ०५:२६:००
नेपालमा हरेक संस्थाका पदाधिकारीले आफू निवृत्त भएपछि आत्मकथा लेख्ने फेसनै चलेको छ । न्याय क्षेत्रमा पनि यो रोग प्रवेश गरिसकेको छ । केहीअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले आफ्नो जीवनगाथा पुस्तकका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सुशीला कार्कीले ‘कुलिङ पिरियड’ समेत नराखी तात्तातो आत्मकथा प्रकाशित गरेकी थिइन् । कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि आत्मकथाको तयारीमा छन् । त्यसका केही अंश उनले विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशित गरिसकेका छन् । ती अंशले पनि उनको पुस्तकको अभिमुखीकरणबारे पर्याप्त संकेत गर्छन् ।
सुरक्षा, न्याय र परराष्ट्रसम्बन्धी निकायमा रहेका पदाधिकारीसँग राज्यका संवेदनशील सूचना हुन्छन् । ती सूचना र जानकारी बाहिर ल्याउने उचित समय र सन्दर्भ हुन्छ । तर, नेपालमा सार्वजनिक खपतका निम्ति, आफ्नो विगतलाई धोईपखाली गर्नका निम्ति वा आफ्ना विरोधीको बद्ख्वाइँ गर्नका निम्ति आत्मकथा लेख्न प्रवृत्ति छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले पनि यही प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै ‘न्यायपालिकामा चार दशकः मेरा सम्झना’ पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।
यस पुस्तकमा रायमाझीले आफ्ना पूर्ववर्ती, सहकर्मी र कतिपय उतरवर्ती न्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशको बद्वाइँ गरेका छन् । उनले संस्मरणात्मक शैलीमा जुन घटनाहरु प्रस्तुत गरेका छन्, हरेकमा आफू हिरो र बाँकी सबै भिलेनका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
अरु त अरु, विश्वनाथ उपाध्याय र केदारप्रसाद गिरीजस्ता प्रधानन्यायाधीशको समेत निष्ठामाथि उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आफू हिरो बन्नका निम्ति आफ्नै सफलता र उपलब्धिले नपुगेमा मान्छे अरुको बद्ख्वाइँतिर लाग्छ । रायमाझीले यही सूत्र अंगीकार गरेको पाइयो ।
उनी कसरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएका थिए भन्ने लोकलाई थाहा नभए पनि शक्ति सन्तुलनमा चासो राख्ने राजधानीको कुलीनतन्त्रभित्रका मुख्य पात्रहरुलाई राम्रोसँग जानकारी छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म पुग्न उनले कुन हदसम्म प्रयास गर्नुपरेको थियो र त्यसमा कसको के भूमिका थियो भन्ने कुरा रायमाझीले बिर्से वा अब जे लेखे पनि मान्छेहरुले सजिलै पत्याइहाल्छन् भन्ने ठाने ? तर, यथार्थलाई जतिसुकै बाक्लो आवरणले ढाकछोप गरे पनि एक दिन अवश्य नांगिइन्छ भन्ने कुरा देशको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई अरुले सिकाउनुपर्ने होओइन ।
अरुका कमजोरी र आफ्ना गुणहरुको मात्र बखान गर्दा उनलाई कत्ति पनि अप्ठेरो लागेको देखिँदैन । कतिपय स्वर्गवासी न्यायकर्मीमाथि हिलो छ्याप्नुअघि उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबारे सामान्य समझ पनि नराखेको देखिन्छ । किनभने, उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि विश्वनाथ उपाध्यायसम्मलाई जुन तहको आरोप लगाएका छन्, त्यसबारे स्पष्टीकरण दिने अवसर समेत आरोपितसँग छैन ।
अरुका बारेमा दोष देखाइसकेपछि रायमाझीले इमानदार बन्न चाहेका भए आफ्नै अँध्यारा पक्षबारे पनि उल्लेख गर्नुपथ्र्यो । विगतमा आफूबाट भएका गल्ती र अवैध क्रियाकलापबारे पनि उनले प्रस्ट पारी प्रायश्चित गरेको भए उनलाई महान् नै मान्न सकिन्थ्यो । उनकी श्रीमती शक्ति रायमाझीको शक्ति अभ्याससँग सम्बन्धित चर्चित प्रकरणहरु इतिहासबाट कसैले मेटाएर मेट्न सकिने अवस्था छैन । रायमाझीले नलेखे पनि भरत गुरुङ काण्डबारे अरु धेरै इतिहासकारले पक्कै नोट गरेको हुनुपर्छ ।
रायमाझी परिवारको अस्वाभाविक आर्थिक हैसियतले पनि एउटा इमानदार न्यायाधीशको प्रमाण दिँदैन । गाउँबाट चप्पल लगाएर काठमाडौँ प्रवेश गरेका रायमाझीसँग अहिले कति सम्पत्ति छ भन्नेबारे सम्भवतः उनी स्वयंसँग हिसाबकिताब छैन । बानेश्वर र मानभवनमा मात्र उनीसँग कम्तीमा २० करोडबराबरको घरजग्गा छ । यो हैसियत एउटा इमानदार न्यायाधीशले आफ्नो वैध आयस्रोतबाट हासिल गर्न कति समय लाग्ला ? जोकोही न्यायाधीशले बताइदिन सक्छ ।
रायमाझी कुनै नाम चलेका वकिल थिएनन् । सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि होइन । दरबारको चाकडी गरेर न्याय सेवा प्रवेश गरेका उनले दरबारकै आडमा कतिपय लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरुमाथि बेलाबेला हिलो छ्याप्ने काम गरेको कतैबाट छिपेको छैन । कमल थापाका सम्धीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धमिजा काण्डको धमिलो पोत्न खोज्नु कुनै अनौठो भएन । घूस र भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म कसैले औँलो उठाउन नसकेको विश्वनाथ उपाध्यायको परिवारमाथि जथाभावी आरोप थोपर्नु पनि मीनबहादुरको धर्मभित्रै परेको मान्न सकिन्छ । उपाध्याय परिवारप्रति उनको कुन हदसम्मको पूर्वाग्रह रहेछ भन्ने कुरा वैद्यनाथ उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्नकै लागि छानीछानी बाहिरबाट ल्याएर प्रकाश वस्ती र सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्चमा नियुक्त गर्नुले पनि पुष्टि गर्छ ।
अझ हाँसउठ्दो कुरो त के भने कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतका एउटा पनि अवगुण नदेख्ने रायमाझीले विश्वनाथ उपाध्यायका अवगुणै अवगुण कसरी देखे ? यति मात्र होयन, केदारप्रसाद गिरीजस्तो सरल, सोझो र इमानदार व्यक्ति, जसले उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन निकै प्रयास समेत गरेका थिए, उनीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने ठाउँमा रायमाझीले उल्टै निम्नस्तरको टिप्पणी गरेका छन् । यसले पनि रायमाझीको साँघुरो सोचको प्रमाण प्रस्तुत गर्छ ।
पुस्तकमा उल्लिखित घटना विवरणलाई यथार्थसँग तुलना गर्ने हो भने रायमाझीको यो पुस्तक कृतघ्नता, आडम्बर र झूटको पुलिन्दा मात्र हो । रायमाझी र उनको परिवारको विगतबारे जानकारी नभएकाहरुबाट त केही क्षण उनले वाहवाही कमाउलान् तर त्यो क्षणिक हुनेछ । उनको सबै यथार्थ बाहिर ल्याउने हो भने उनको कृत्रिम व्यक्तित्वका लागि त्यो साह्रै महँगो पर्न सक्छ । वयोवृद्ध उमेरमा उनले यो जोखिम नलिँदा नै उचित हुन्थ्यो कि ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले अन्य ९ प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाए यस्ता आरोपहरु